WordPress နှင့် MySQL: သင်၏စကားအရေအတွက်မှာအဘယ်နည်း။ | Martech Zone
ဘလော့ဂ်များတွင် WordPress ပို့စ်၏ပျမ်းမျှအရွယ်အကြောင်းဆွေးနွေးချက်အချို့ရှိသည်။ Search Engines သည်ပထမ၏သက်ရောက်မှုကိုသာအလေးထားလိမ့်မည်ဟုအလင်းရောင်အချို့ထုတ်ပေးသည် x အက္ခရာနံပါတ်၊ လက်ရှိတွင် x x မသိသောနေရာ။ ရလဒ်အနေနှင့်၎င်းနောက်တွင်မည်သည့်အရာမျှစကားလုံးများကိုဖြုန်းတီးပစ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။
ကနေ image ကို စကားလုံး!
ငါဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းအောင်လုပ်ထားတာကြောင့်ဒါကြောင့်ငါထပ်မံလေ့လာဆန်းစစ်မှုပြုပါလိမ့်မယ်။ နှုတ်ကပတ်တရားတော်အရေအတွက်။ ငါသိပ်သိပ္ပံနည်းကျမရပေမယ့်ငါပိုပြီးနက်ရှိုင်းတဲ့ကြည့်ရှုချင်တယ်။
WordPress အတွက် Word Count ကိုဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ။
MySQL တွင် MySQL အတွက်စာလုံးရေထည့်သွင်းသည့် function မပါရှိပါ။ သို့သော်အခြားအဖြေမရသောမေးခွန်းများကဲ့သို့ပင် blogosphere ရှိစမတ်ကောင်လေးတစ် ဦး သည် Word Count ရရှိရန် MySQL ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုဖြေဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
`ID`၊ ` post_date`၊ `post_type 'ကိုရွေးပါ။
SUM (အရှည် (`post_content`) - အရှည် (အစားထိုး (` post_content`, '', '')) + 1) 'Wordcount' အဖြစ်
`post_type` = 'post' နှင့်` post_status` = 'publish' ရှိခြင်း
`post_date` DESC ဖြင့်မှာသည်
0, 100 ကန့်သတ်
ရှာဖွေရေးယန္တရားနှင့်အမှန်တကယ်အလေးချိန်ရှိသောကြောင့်လက်ရှိတွင်ကျွန်ုပ်သည် 'ပြီးပြည့်စုံသော post အရွယ်အစား' ကိုစာရင်းသွင်းခြင်းမပြုပါ စကားလုံးရေတွက်ရုံမျှသာမဟုတ်ပါသို့သော်ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်အရေအတွက်။ သင့်မှာအချိတ်အဆက်တွေအများကြီးကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့စကားလုံး ၂၀၀၀ လောက်ရှိရင် သင်၏ပို့စ်၏မှန်ကန်သောအရွယ်အစားမှာစကားလုံး ၂၀၀၀ ဖြစ်သည်.
သြဂုတ်လ 27 ရက် 2008 ခုနှစ် 2:21 နာရီ
ရလဒ်ကတော့ အဲဒီနောက်မှာ ဘာမဆို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း စကားလုံးတွေချည်းပါပဲ။
ကောင်းပြီ၊ မင်းရဲ့စာဖတ်သူတွေမဟုတ်ဘဲ Google အတွက်ရေးနေသမျှကာလပတ်လုံး
သြဂုတ် 28, 2008 မှာ 12: 26 AM
သင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များအတွက် ပျမ်းမျှစကားလုံးအရေအတွက် စသည်တို့ကို ပြောပြပေးသည့် "Blog Metrics" ဟုခေါ်သော ပလပ်အင်တစ်ခု ရှိပါသည်။ ၎င်းကို အဘယ်ကြောင့် မကြိုးစားပါနှင့်။
စက်တင်ဘာ 11, 2011 မှာ 5: 54 AM
ကျွန်တော် အမှတ်ရသွားတဲ့အထိ ရေးလိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာကို ဝယ်တဲ့လူတွေက စကားလုံးရေတွက်တာ မိုက်မဲလိုက်တာလို့ ထင်ပါတယ်။
11:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 6, 28 မှာ
Casey - ငါမင်းကို လုံးဝသဘောတူတယ်။ လူတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ ရုပ်ပုံတွေနဲ့ ကျည်ဆံအချက်တွေကို အသုံးပြုဖို့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အမှတ်ရပြီးပြီလို့ ထင်ရတဲ့အထိ ရေးလိုက်ပါတယ်… ပြီးတော့ ဒီထက်နည်းအောင်တော့ မကြိုးစားပါနဲ့။